Help Me Grow WA • A brighter future for children
Barnaamijka Help Me Grow ayuu ka bilaabmaa mustaqbalka aayo roon ee carruurta
War dheeraad ah Hel
Waddanka oo dhan, barnaamijka Help Me Grow waxuu qoysaska u suurtogeliyaa in ay dhib la'aan ku helaan adeegyada iyo taageerada bulshada si ay ugu fududaato in ay la xiriiraan khayraadka ama adeegyada ay u baahan yihiin, goorta ay u baahan yihiin.
Shabakadda barnaamijka Help Me Grow ee Washington waxaa ku jira isbaahaysiga kordhaya, awood leh ee bulshooyin iyo shakhsiyaad u hoggaansan in ay nidaam habaysan u dhisaan khayraadka bulshada si carruurta looga caawiyo in ay caafimaad ku koraan.
War dheeraad ah ka hel barnaamijka Help Me Grow
Sida Uu u Shaqeeyo ama u hirgalo
Barnaamijka Help Me Grow waa nidaam lagu kalsoon yahay oo isku xirxiran oo horta u daneeya qoysaska – waxaana lagu hubiyaa in khayraadka ama adeegyada ay heli karaan ilme walba iyo bulsho walba.
Soo hel Khayraadka
Ma u baahan tahay khayraad ama adeegyo? War dheeraad ah ka hel barnaamijka Help Me Grow oo arag lambarrada telefoonka Khadadkayaga macluumaadka barnaamijka Help Me Grow ee gobolka oo dhan iyo degaanka ama xaafadda.?
Waxa aan Annagu Qabanno
Hay'adda WithinReach ayaa hoggaanka u haysa in barnaamijka Help Me Grow loo fidiyo gobolka oo dhan. Marka aan maanta taageerno carruurta iyo qoysaska, waxaan abaabulaynaa bulshooyinka caafimaad leh, ee firfircoon ee berrito.
Gargaar Diyaar La ah
Qoysaska oo dhan ayaa heli kara barnaamijka Help Me Grow. War dheeraad ah ka hel barnaamijka Help Me Grow si aad u ogaato habka aad ku heli karto khayraadka daruuriga ah ee caafimaadka iyo bulshada.
Wararka + Munaasabadaha
Ma doonaysaa inaad wax badan ka ogaato horumarka ilmahaaga?
Baadhitaannada korriinka waa taxane su'aalo-ururin ah oo uu buuxin karo qofka sida fiican u yaqaan ilmahaaga, ADIGA.
War dheeraad ah ka hel sida aan u taageerno carruurta iyo qoysaska Washington: